အန်းဒရွိုက် Themes Apps ကပ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » themes
Category: - Themes
themes Apps ကပ APK ကို
သင့် android device အသစ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြည့်စွက်အတွက်အသည်းအသန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, တော်တော်များများအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ် themes များ အန်းဒရွိုက်မှာများအတွက်ရရှိနိုင် Apps ကပ APK ကို။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်က hard သူတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်ကိုရှာတှေ့နိုငျသညျ။ ကံကောင်းတာကခေတ်သစ်စမတ်ဖုန်းတွေအများကြီးပိုပြီးစိတ်ကြိုက်ကျကွီးရှယျအိုမြားထက်ဖြစ်ကြသည်။
သင်အလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်နောက်ခံပုံများ, icon များ, ကီးဘုတ်, စာသားနှင့်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်အတိုင်း, သင်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် Android စမတ်ဖုန်းအတွက်အရာအားလုံးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြဿနာက Android devices များကြောင့်အများစုစိတ်ကြိုက်အသားအရေနှင့်အတူကြွလာတော်မူနှင့်သာအနည်းငယ်စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်စတော့ရှယ်ယာကို Android ကိုဆက်ကပ်။ တိကျတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ဖုန်းသူတို့ရဲ့ UI ကိုအတူလာပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Vivo FunTouch OS ကိုရှိသည်ဖို့လူသိများသည်, Xiaomi ကဖုန်းများတစ်ခုမှာ UI ကိုအတူ MIUI, အောက်ဆီဂျင် OS ကိုအတူ OnePlus နဲ့ Samsung အတူပါလာ။
ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသော UI ကိုရန်, themes များမှာလည်းသင့်ရဲ့ Android device ကိုမှအညီအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်နီးပါးမဆို branded စက်ပစ္စည်းတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရရှိနိုင်ကွဲပြားခြားနားသော Android ကို themes များရှိပါသည်။ တဦးတည်းအမှတ်တံဆိပ်ထဲကနေသည့်ကိရိယာများကိုအခြားအမှတ်တံဆိပ်အတွက် themes များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်. , နှစ်ဦးစလုံး devices များအတွက်အထူးသဖြင့်ဆောင်ပုဒ်ကိုကြိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့, သင်အေးမြတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် themes များ at Apps ကပ APK ကို.
သငျသညျကို Android ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်ဆောင်ပုဒ်ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလျှင်, သင်ကပထမဦးစွာဖွင့်တင်တပ်ဆင်ရန်ရှိသည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်, ဆောင်ပုဒ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်သည်လက်ျာ launcher download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုပေမည်။ ပြီးတာနဲ့ပြုဆောင်ပုဒ်သက်ဆိုင်ပါသည်။
သငျသညျအသီးအသီးဖြတ်သန်းနေ့ရက်ကာလ၌ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျော်, စိတ်ကြိုက်များအတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ သင်အကြိုက်ဆုံးဆောင်ပုဒ်ကိုအလွယ်တကူ setting များကို menu ကိုအိမ်ဖန်သားပြင်, icons နဲ့ကီးဘုတ်၏ခြုံငုံကြည့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့က Android ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံး themes များပူဇော်သွားနေကြသည်။ လောလောဆယ်ကြောင့်ရှေ့ဆက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနေဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်အလွယ်တကူကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်နှင့် tweaks နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် Launcher 2019 ...
S9 တင်ပေးသူ - အက်စ်အက်စ်က Galaxy ...
အစိမ်းရောင် Flame ဟာဖွင့်တင် + Themes ...
GO DIY Themer (Beta ကို)
iLauncher 10 ပေါင်း
မူရင်းအဓိကအကြောင်းအရာ - ZERO ...
အေးမြသောအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ - ZERO ...
KakaoTalk အဓိကအကြောင်းအရာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို -...
နီယွန် Lines - တစ်ကိုယ်တော်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ